‘यौ’,न सन्तुष्टी कुन उमेरका महिलासँग ‘यौ’,न स,म्पर्क गर्दा बढी मिल्छ ? – Ujyaalo Patrika
Everyday Moments: LGBTQ+
त्यस्तै महिलाहरुले औषतमा १७ वर्षको उमेरमा आफ्नो कु८मा,रि,त्व गुमाउने गरेका छन् । यस्तै पुरुषहरुको हकमा औषतमा १८ वर्षको उमेरमा उनीहरुको भ७ र्जिनिटी तो,डिने र २९ वर्षको उमेरमा से७ क्सको मामिलामा सबैभन्दा बढि स क्रिय हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अनलाइन मार्फत गरिएको यो अध्ययन एक यौ७ न खेलौना उत्पादक कम्पनीलेगरेको हो । यसअघिको अर्को अध्ययनले भने पुरुषले १८ वर्ष तथा महिलाले ३० वर्षको उमेरमा से७ क्समा सबैभन्दा धेरै मज्जा लिने निष्कर्ष निकालेको थियो। (यौ७ न समस्या र समाधान)
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा बनाइएको कोरोना खोप प्रभावकारी /
१८ असार । कोरोना वि”रुद्वको खोप निर्माण गर्ने दौडमा प्रथम रहेको अक्फोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको खोप एस्ट्राजेनेका प्रभावकारी सावित हुँदै गएको छ । करिब आठ हजार व्यक्तिमाथि खोप परिक्षण गरिएको थियो ।
परिक्षणको नतिजा सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ । एस्ट्राजेनेकाले कमजोर पतिरक्षा प्रणाली भएको मानिसमाथि पनि निकै प्रभावशाली भएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त खोपको तेस्रो परिक्षण भइरहेको छ । खोप निर्माण गर्ने क्रममा खोपबाट एडिनोभाइ’रस नामक रसायनलाई समावेश नगरिकन निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।
एडिनो भाइ’रस समावेश नभएको कारण यसले कमजोर मानिसका लागी पनि सं’क्रमण संग लड्न मद्दत पुर्याउने जनाइएको छ । खोपले भाइरसवि’रुद्व ल’ड्न आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्न मद्दत पुर्याउने छ ।
त्यसैगरी भारत वायोटेकद्वारा निर्मित कोभ्याक्सिनले समेत भारत सरकारबाट परिक्षण गर्न मान्यता पाइसकेको छ । उक्त औषधीको तेस्रो चरणको परिक्षण प्रारम्भ भएको छ ।
यूएस वायोटक फार्मा इनोभियोले समेत आफ्नो सुरुवाती क्लीनीकल परिक्षणको दौरान साकारात्मक देखिएको छ । यस दौडमा जर्मनी वायोटेद्वारा निर्मित फाइजर र चीनद्वारा निर्माण गरिएको क्यानसिनोसमेत खोपको दौडमा आफ्नो अग्रसरता देखाइरहेको छ ।
Previous अचम्मको फौजी कमिला : जसले सिंगो गैंडालाई नै तीन दिन चत पारिदिन्छ, भने पुल बनाएर खोलासमेत पार गर्छ (भिडियो सहित) !
Next यी कलाकार, जसले आफ्नै स्तनले बनाउँछिन् सुन्दर तस्बिर